curri maayar ah
Buuhoodle, 27 Feb 2014(Alldhooftinle.com)
Mareykanka Magaalooyinkiisa Qaar Baa Curri (Bisad, dinnad) Maayar Ka yahay 16 Sannadood.
Magaalo la yiraahdo Talkeetna oo ku taala gobolka Alaska ee dalka Maraykanka ayaa u doortay Curri (labka bisadda) inuu u noqoto maayarka ama duqa magaalada. Currigaas oo la yiraahdo Stubbs wuxuu noqday currigii ama bisadkii ugu horeeyey ee xilkaas loo doorto.
Magaaladaas oo ay ku nool yihiin 900 qof ayaa u dooratay Currigaa, Mayor Stubbs, inuu maayar u noqdo July, 1997 isagoo 3 bilood oo keliya jira. Currigaas oo dhashay April 12, 1997 ayaa maalin dhow (April 12, 2014) waxa loo dabaal degi doonaa lix iyo toban guuradii ka soo wareegtey markuu xilkaa qabtay.
Dadka magaaladaa degan ayaa ku faraxsan inay Curri u doorteen duqqa ama maayarka magaaladooda.
Waxay tiri haweeney ka mid ah dadka magaaladaas degan, "Waan jeclahay maayarka waayo intii uu xilka hayey naguma kordhin wax cashuur ah".
Dhinaca dhaqaalaha ayaa la sheegay inay magaaladaasi kor u soo kacday tan intii ay Currigaas doorteen sababtoo ah waxaa kordhay dadka dalxiiska u imanaya si ay u arkaan Currigaa maayarka ah. Waxa kaloo laga raystay wareerkii iyo loolankii siyaasiyiinta hadba isu soo sharxi jirey jagadaa Duqqa Magaalada Talkeetna.
August 31, 2013 ayaa Currigaa maayarka ah waxaa dhaawac xun u geystay keleb (ey) aan waqtigaa laga soo dhaadhicin oo aan loo sheegin maayarnimada Currigaa, taasoo keentay in maayarka loo qaado cisbitaalka ugu qaalisan gobolkaas laguna sameeyo qaliimo fara badan oo aad qaali u ah.
Intii ay socotay daaweynta maayarka waxay dadka magaaladaasi isugu tegi jireen kaniisadaha si maayarkooda ilaahay u caafimaadiyo. Kelebkii dhaawacay mayorka, isaga waxa lagu soo dacweeyey isku day dil badheedh ah oo uu la rabay maayarka.
Bisadkaa oo hadda sii gaboobaya ayaa lays weydiinaya markuu dhinto in bisad kale la dooran doono iyo in bani'aadam la caleema saari doono. La arki doonee..